Hery Rajaonarimampianina: Mitohy ny fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana
samedi, 25 novembre 2017 22:04
Nosarontsaronana tamin'ny fitokanana fotodrafitr'asa nataon'ny fanjakana ny fandaniam-bola mihoampampana ataon'ny antoko HVM aty Mahajanga amin'ny fihaonam-be ataon'ity antoko ity ato anatin'ny Faritanin'i Mahajanga.
Ny fanaovana filankevitry ny minisitra mitety faritra notarihin'ny filoham-pirenena Hery Rajonarimampianina no nanaronana izany mba hanapenana ny mason’ny vahoaka.
Mibaribary fa fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana hanomanana fifidianana no antony. Tonga aty Mahajanga avokoa ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta tarihin'ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier, ireo mpikambana eo anivon’ ny Antenimierandoholona tarihin’ny filohany, Rivo Rakotovao sy ireo solombavam-bahoaka avy amin’ny faritra maromaro.
Azo ampiasaina manomboka izao ny trano vaovaon’ny Commissariat Central Mahajanga. Fotodrafitr’asa efa antitra no nisy teo aloha ary tsy nisy fanamboarana. Voatery narodana izany ny faramparan’ny taona 2016 ary tafatsangana ny trano vaovao ny fiandohan’ny taona 2017; izao anefa vao azo ampiasaina noho ny fiandrasana ny filoham-pirenena hitokana azy.
Efa volana vitsivitsy ihany koa izay no nahavitan’ny lalana nasiam-panamboarana miazo ny oniversite Ambondrona miainga eny Mazava Huile ; vita niaraka tamin’ny Amphithéâtre an’ny IBA na ny Institut de Biologie Appliquée ao amin’ ny oniversite saingy niandrasana izao hetsika fihaonam-ben'ny HVM izao mba handrebirebena ny sain’ny mponin'i Mahajanga fa tena miasa izao fitondrana izao.
Notokanaa ihany koa ny Laboratoire de semences an’ny FOFIFA eny Betamanga Mahajanga; fotodrafitr’asa izay fanomezana avy amin’ny fanjakana japoney.
Natolotra androany koa ireo fitaovana avy amin’ny BNGRC ahitana tracteur, ambulance, fiarabe mpamonjy voina ary fiara fitaterana fako hiatrehana ny loza voajanahary mandalo aty amin’ny faritra.
mardi, 12 décembre 2017 21:05
lundi, 11 décembre 2017 23:42
lundi, 11 décembre 2017 23:00
dimanche, 10 décembre 2017 20:45
dimanche, 10 décembre 2017 19:23
dimanche, 10 décembre 2017 18:59
samedi, 09 décembre 2017 20:31
samedi, 09 décembre 2017 05:14